Tafayor gam akporo Antivirus: ngwọta kacha mma megide ramsonware | Gam akporosis
Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na afọ ole na ole gara aga inwe ụdị mmemme a pere ezigbo mpe, ihe na-agbanwe. Enwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwa ugbu a ransomware zoro ezo nke na-egbochi njirimara onye ọrụ ahụ. Na nke a, anyị ga-agbakwunye eziokwu ahụ naanị pasent 10 nke antivirus ugbu a na-achọpụta ngwa ọjọọ.
Gịnị bụ ihe ngwọta ya? Tafayor, a A gam akporo antivirus n'ezie zuru ezu na na anyị nwere ike ibudata n'efu na ụlọ ahịa ngwa Google. Anya, nke burula obodo nke dNdị mmepe XDA onye na-akwado ọrụ a, yabụ anyị nwere ike inye eziokwu zuru oke na ngwa a dị mkpa maka ngwaọrụ gị.
Nke a bụ otu Tafayor si arụ ọrụ, antivirus dị fechaa maka ekwentị gam akporo gị
Ee, ihe ọhụrụ a gam akporo antivirus nwere ọnụọgụ ole na ole, mana ọ bụ ihe nkịtị ebe ọ bụ na etinyego ya na sava nke ngwa ngwa Google ngwa ngwa. Mana enwere nkọwa ole na ole anyị hụrụ n'anya. Iji malite, Tafayor Antivirus nwere a arọ nke megabytes 4.5, n'ihi ya, ọ gaghị ewute gị na ekwentị gam akporo gị.
Na nke a, anyị ga-agbakwunye eziokwu na gam akporo antivirus a nwere mfe na kensinammuo interface. Nke kacha mma? Na ọ bụghị naanị ike ịchọpụta ngwa nwere ike imebi. Ọ bụghị naanị nke ahụ: ọ nwere ike ịchọta ngwa zoro ezo na-arụ ọrụ na ndabere iji belata ngwa gị.
N'ikpeazụ, ma ọ bụ, kwuo nke a A gam akporo antivirus Ọ nwere mmelite kwa ụbọchị iji melite nchekwa data ya, yana ịnwe nchedo oge, yabụ ị nwere ike ijide n'aka na ngwa ọ bụla nwere ike imerụ ahụ ga-ewepụ na ama gị.
N'iburu n'uche na Tafayor dị obere, na ị gaghị akwụ ụgwọ euro iji nwalee ya, anyị anaghị efunahụ ihe ọ bụla site na nbudata a antivirus gam akporo iji nwee udo nke uche na, ọ bụ ezie na anyị doro anya na ụzọ kachasị mma iji kpuchido ama ma ọ bụ mbadamba anyị site na ramsonware bụ iji ọgụgụ isi mee ihe, ọ ga-abụ ihe isi ike karịa ngwa ahụ anyị ibudatara site na isi mmalite nke omume doro anya, ọ gaghị emerụ ekwentị anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Tafayor, a nnọọ ìhè gam akporo antivirus maka mkpanaka gị
Naanị ihe iyi egwu na-achọpụta aghụghọ a, bụ ngwa arụnyere nke na-esiteghị na ụlọ ahịa Play, ọ naghị agwa m ihe ọhụụ ọ bụla na amaghị m, ego ole ka ị nwetara maka ịkwalite aghụghọ a (m na-ekwu androidsis) ??????
ZTE Blade A5 2019: Usoro ntinye ọhụụ ọhụrụ nke ika ahụ